०७७ जेठ २० गते मंगलबार ई. स. २०२० जुन ०२ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो छ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > ०७७ जेठ २० गते मंगलबार ई. स. २०२० जुन ०२ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो छ!
admin June 1, 2020 June 1, 2020 Uncategorized 0
मिति २०७७ साल जेठ २० गते मंगलबार। भोलिको राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
मेष राशी – नयाँ कार्य प्रारम्भ होला। धनसम्पति हात पर्ने छ। वैदेशिक यात्रा योग पनि छ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। यात्रा सफल हुने छ। मन प्रसन्न रहला। शुभकार्यको थालनी होला।
वृष राशी – यात्राको योग छ। परिवारसँग भेटघाट होला। दिन रमाइलो गरी बित्ने छ। अध्ययनसम्बन्धी कार्यमा प्रगति हुने देखिएको छ। सिर्जनशील क्षेत्रमा मन जाने छ। र, सफलता पनि हात लाग्ने छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ।
मिथुन राशी – आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ। पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। कला क्षेत्रमा काम गर्नेलाई धेरै राम्रो दिन छ।
कर्कट राशी –– मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति होला। कार्यमा सफलता पाइनेछ। नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। व्यापार–व्यवसायीहरुले उच्च नाफा आर्जन गर्ने योग छ।
सिंह राशी –अध्ययन अध्यापकको क्षेत्रमा सफलता हासिल हुने छ। धन खर्च भएपनि मन प्रफुल्ल रहने छ। दिन राम्रो छ। कला क्षेत्रमा सफलताको योग छ। महिलाहरूका लागि सौन्दर्य क्षेत्रमा सफलता हासिल होला।
कन्या राशी – आर्थिक उन्नति हुने छ। नेतृत्व गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ। धनसम्पति जोड्ने योग छ। आफन्तबाट सहयोग हासिल हुने छ। मन प्रशन्न रहला। पैसा कमाउने अवसर प्राप्त होला। मित्रजनसँग भेट हुने छ।
तुला राशी – पैसा खर्च सोचेर मात्रै गर्नु होला। स्वास्थ्य समस्या अन्त्य हुने छ। मित्रहरूसँग भेट हो। जागिरमा बढुवाको योग छ। आम्दानी बढ्ने छ। आफन्तबाट सहयोग पाइने छ। आकस्मिक धन लाभ हुने योग छ। यात्राको पनि योग छ। दिन रमाइलोसँग बित्ने छ।
वृश्चिक राशी – मानसिक चिन्ता बढ्नेछ। यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ। घरायसी झमेलामा परिएला। अपरान्हपछि मन शान्त हुने छ। चिन्ता समाप्त हुने छ। धर्मको गरेपनि अपजस मिल्ने छ।
धनु राशी – सरकारी कामकाजले तनावै–तनाव झेल्नु पर्ने छ। स्वास्थ्यमा गडबढी आउने छ। प्रेममा धोका मिल्ने योग छ। धनसम्पति जोड्ने योग छ। आफन्तबाट सहयोग हासिल हुने छ। मन प्रशन्न रहला।
मकर राशी – प्रेममा वियोग हुने योग छ। दिन सोचेजस्तो राम्रो हुने छैन। आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाका कारण मानप्रतिष्ठामा आँच आउने छ, विवाद बढ्ने छ। मानसिक चिन्ता बढ्नेछ। यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ।
कुम्भ राशी – धन खर्च भएपनि मन प्रफुल्ल रहने छ। दिन राम्रो छ।मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति होला। कार्यमा सफलता पाइनेछ। नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। व्यापार–व्यवसायीहरुले उच्च नाफा आर्जन गर्ने योग छ।
भर्खरै गयो जापानमा यस्तो डरलाग्दो भूकम्प!
४० बर्षिया महिलाको ब्य’था- बिहेअघि कुमारी नै थिए त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात यस्तो भयो…